သဒ္ဓါလှိုင်း: သူငယ်ချင်း မဲ့…
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:53 PM
ကိုယ်ချင်းစာတယ် တခါတလေ ဒီလိုပဲ
ဆက်လက်အားပေးနေပါကြောင်း ခင်ဗျာ ။
နည်းနည်းတောင် နောက်ကျသွားတယ်၊ လာရောက်အားပေးသွားပါတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
ကျွန်တော်တို့လည်း နိင်ငံရပ်ခြားမှာ စိတ်နှစ်ပြီး ပေါင်းဖြစ်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ညတွေကို ခဏခဏသတိရမိတာပေါ့။
ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေပါသေးတယ်ဗျာ။
ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့
ဟုတ်တယ် မဒါ ကျွန်တော်က ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ သူငယ်ချင်းမဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း တကိုယ်တည်းနေ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း နေကြရတဲ့ သူတွေပါပဲဗျာ
Myat Khine said...
ကောင်းပါတယ် အရမ်းဘဲ....တစ်ချိုလူတွေဆိုရင် တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီး ဟထိသွားနိ်ူင်တယ်။
ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်ရွှင်အောင် အထီးကျန်ခံစားချက်တွေ မဖြစ်အောင် ဒီလိုဘဲ ကြံဖန်နေထိုင်ရတာဘဲပေါ့လေ။
အပြင်မှာ တကယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဆုံနိုင်ရင်တောင် အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။ စာလေးတွေ များများဖတ်ပြီး များများရေးတာဟာလည်း အထီးကျန်ခံစားချက်ကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပါသေးတယ် .
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိပါစေ
crystal၊ ဦးမင်းဒင်၊ တောက်ပကြယ်စင်၊ မြစ်ကျိုးအင်း၊
ကိုဇော်၊ ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)၊ လင်းခေတ်ဒီနို၊ မြတ်ခိုင်၊ မချော စတဲ့............
ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့ စိတ်ခွန်အား ဖြစ်စေတဲ့ စကားလေးတွေအတွက်
တယောက်တလှည့် ဖေးမကူညီ အားပေးကြရင်း ဘဝလမ်းကို ဆက်လျှောက်ကြရအောင်နော်...
ဘ၀တူပေမို့ စာဖတ်ပြီး ငူတူတူ ဖြစ်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းမဲ့ လူသား။ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။
သူငယ်ချင်းမမဲ့ပါနဲ့. .. အနားမှာ အများကြီးဖြစ်မှာပါ မသဒ္ဓါ. . . စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ နော်.
ဒီလိုပါပဲ တခါတလေ အနီးက သူငယ်ချင်းထက် အဝေးက သူငယ်ချင်းတွေကို တမ်းတမိတတ်ပါတယ်။ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝေးနေတာ အေးချမ်းမှုတစ်ခုကို လက်လွတ်ထားရသလို ပါပဲ...